New Belkin na Incase naịlọn na akpụkpọ anụ eriri maka Apple Watch | Esi m mac
New Belkin na Incase Akpụkpọ anụ na naịlọn eriri maka Apple Watch
Ọtụtụ ndị bụ ndị rụpụtara amatala na ụwa gbara gburugburu Apple Watch na-adịwanye mkpa yana ịme ngwa maka ya ga-eduga n'ichebe ahịa. Nke ahụ bụ ihe ndị dike abụọ nke ngwa ngwaọrụ mkpanaka chere Belkin na Incase ndị kwuputara ọbịbịa nke eriri abụọ maka Apple Watch mere nke naịlọn na akpụkpọ anụ.
Ndị a bụ eriri ọhụrụ nwere usoro mmebi iwu na ihe ịga nke ọma ga-eme ka Apple Watch ọhụrụ gị dị oke mma. Anyị na-ekwu banyere eriri ejiri si naịlọn na akpụkpọ anụ mee.
Akara Incase ahụ emeela ụdị eriri ọhụụ iri na abụọ emere naịlọn nke ga - enyere gị aka iyi elekere ọhụụ site na ịnwe ike ịgbanwe eriri ahụ ọtụtụ oge ịchọrọ. Chegharịrị Apple Nylon Straps ma nye ha mmetụta ya pụrụ iche. Companylọ ọrụ Belkin maka nke ya elekwasị anya n'ọtụtụ ụdị eriri ejiri ezigbo akpụkpọ anụ mee.
N'ihe banyere ọnụahịa, Ọ bụrụ na eriri nylon na-efu ihe ruru € 36, ọnụahịa dịtụ ala karịa nke Apple n'onwe ya tinyere na eriri ya nke otu ihe ahụ. Eriri Belkin ojii, isi awọ na agba aja aja, ka ọ dị ugbu a, ha nwere ego nke € 79,95 Ulo oru abuo a echewo uzo 38 mm na 42 mm, ya mere ihe obula elekere gi igha enweta otu n’ime ihe ndi a.
1 Belkin echebe
2 Ajọ Belt
Akpụkpọ anụ Italiantali.
Ezubere iji dabara ọtụtụ nkwojiaka.
Omenala e mere ntupu nkechi na mgbachi.
3mm akwa eriri.
Dị na agba atọ.
Na nha abụọ: maka 38mm Apple Watch na 42mm Apple Watch.
Ndakọrịta: Apple Watch 42mm Usoro 1 na 2.
Ihe: naịlọn dị fechaa na-adịgide adịgide.
Nkọwa: Igwe anaghị agba nchara nkechi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Watch » New Belkin na Incase Akpụkpọ anụ na naịlọn eriri maka Apple Watch
Naanị iMac na Mac mini (na 2014) ka ewepụtara na Ọktọba